Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo ka hadashay Bariiska Caaga ee lagu arkay Suuqyada Caalamka | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo ka hadashay Bariiska Caaga ee lagu arkay Suuqyada Caalamka
Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo ka hadashay Bariiska Caaga ee lagu arkay Suuqyada Caalamka
Wasaaradda Beeraha ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay inay sharci adag ka soo saari doonto Raashinka aan tayada laheyn ee dalka la keeno, kaddib markii dhowaan suuqyada caalamka lagu arkay bariis ka sameysan Caag.
Wasiirka Beeraha Xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo maanta wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay wadaan qorshayaal looga hortagayo qatarta ay leeyihiin cuntada aan tayada laheyn ee dalka la keeno.
“Maalmahan waxaa Internet-ka la soo geliyay iyo baraha bulshada bariis caak ka shameysan iyo Cake ka sameysan Koolo, runtii waxaa lagu xakameyn karaa oo lagaga bad baadi karaa sharci lagu ilaaliya tayada raashinta iyo cuntada dibadda laga keeno”ayuu yiri Wasiirka Beeraha.
Waxaa uu sheegay in dhowaan uu Golaha Wasiirada horgeyn doono sharci lagu ilaalinayo tayada raashinka iyo cuntada dibadda laga keeno ee dalka la yimaada.
Baraha bulshada ayaa waxaa maalmihii u dambeeyay la soo dhigay bariis ka sameysan Caag oo suuqyada caalamka lagu iibiyo, waxaana laga digay qatarta uu leeyahay Bariiska.
Tan iyo markii ay bur burtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, ayaa waxyaabaha meesha ka baxay waxaa ka mid ahaa faya dhowrkii iyo badqabka raashinka dalka la keeno, waxaana dhacda in raashin waqtigooda dhacay la soo geliyo dalka
Wasaaradda Beeraha Soomaaliya oo ka hadashay Bariiska Caaga ee lagu arkay Suuqyada Caalamka was last modified: June 28th, 2017 by warsan radio
Wararkii ugu danbeeyay Dagaal khasaaro gestay oo ka dhacay duleedka diinsoor ee Gobalka Baay